Ciyaartoy.com » Kooxda Midnimo oo ku guulaysatay koobkii Somaliweek Minnesota 2012
Kooxda Midnimo oo ku guulaysatay koobkii Somaliweek Minnesota 2012 Jul 5, 2012 - ujawaab	Kooxda Midnimo oo ku guulaysatay koobkii Somaliweek Minnesota 2012
Waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay Karen Clark oo ahayd wakiil gobolka Minnesota, waxaa iyaguna goobta ku sugnaa wakiilka xafiiska Senatorada gobolka ee jaaliyadda soomaalida Mr siyaad iyo Mr warfaa oo isaguna loolanka siyaasadda gobolka wax uga jira.
Kaalinta 1aad …Kooxda Midnimo…. waxaana abaalmarinta bixiyay guddoomiyaha isboortiga ee gobolka Minnesota Cabdi Cali Macallin.
Kaalinta 2aad….Kooxda Boston….Waxaana abaalmarinta bixiyay Rug caddaa isboorti, macallinkii xulka qaranka K/cagta Macallimuu Ibraahim Suudaani.
Kooxdii ugu wanaagsanayd (Best tournment team)waxaa loo gartay kooxda Texas Tigers oo uu ka muuqday diyaargarow aad u sarreeyay oo rigoorayaal ay ku hareen,waxaana abaalmarinta guddoonsiiyay rug caddaa isboorti,Macallin/Garsoore caalami FIFA, Maxamed Xasan Qolof.
MVP(Most Valuable Player) oo uu ku guulaystay ciyaaryahan Majid Cabdalla oo ka socday kooxda Boston ,waxaana abaalmarinta guddoonsiiyay Rug caddaa Isboorti,Macallinkii gobolka Jubadda Hoose Macallin Cabdulqaadir Qariindi.
Goolhayihii ugu wanaagsanaa intuu tartanku socday(Best Goalkeeper) waxaa loo gartay Zakariya Jeilani oo ka socday kooxda Texas Tigers. waxaana abaalmarinta guddoonsiiyay Sahro oo ka mid ah gabdhaha sida aadka ah u taakuleeya dhallinta yaryar ee naadiga Sayec.
Abaalmarinta hoggaanka wanaagsan(Leadership Award),waxaa la siiyay kooxda Boston… waxaana abaalmarinta guddoonsiiyay Cabdi Yuusuf oo ka mid ahaa halgamayaashii isboortiga Soomaaliyeed.
Waxaa iyaduna halkaasi dhallinyarada yaryar ee K/cagta ee naadiga Sayec ay shahaado sharaf halkaasi ku guddoonsiiyeen Sahro waxqabadkeedii iyo taakulaynta ay had iyo jeer la daba taagan tahay caruurta Soomaaliyeed, iyaga oo halkaasi uga soo jeediyay erayo mahadnaq ahaa.
N.B: waxaa iyaguna cayaarahaasi garab socday cayaaro ay ka qayb qaadanayeen cayaartooyda K/cagta naadiga Sayec oo lahaa d’a kala duwan sida: 18jirada,14 jirada iyo 10 jirada iyo kubadda koleyga oo ay ka qaybqaateen 2 kooxood oo yaryar…sidoo kalena waxaa halkaasi ka dhacay cayaaraha fudud iyo jawaanada lagu ordayo oo dhallinta yaryar ay soo bandhigeen…Dhanka madadaalada waxaa iyaduna halkaasi joogtay oo wacdaro ka muujisay fanaanadii Nimco dareen.
« PreviousVia Roma oo ku guulaysatay koobkii K/Koleyga Minnesota 2012	Next »Taariikhda Koobka Horyaalka Soomaaliya	Leave a Reply